OpenSuse စက်ရုံ - ထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
ချစ်တယ် | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
လူအများကငါသုံးတယ်သိတယ် တော့ openSUSE, ပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော့်ရဲ့ PC နဲ့ဆာဗာတွေအားလုံးမှာအကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။အမြဲစိမ်း), ယနေ့ကဗားရှင်း 13.1 ဖြစ်ပါတယ်။
PC တွေမှာတော့မကြာသေးခင်ကအထိ version 13.1 ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့် version 19 ထွက်မယ့်နေ့က ၁၉ ရက်လောက်ကြာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။ ငါ version 13.2 သို့ပြောင်းသလားသို့မဟုတ် Rolling Release ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထပ်မံတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်သဖြင့် OpenSUSE Factory ဗားရှင်းသို့ပြောင်းပါသလား။
1 OpenSUSE စက်ရုံဆိုတာဘာလဲ။
OpenSUSE စက်ရုံထဲသို့ ၀ င်ရောက်နေသော packets များစီးဆင်းနေသည်။ freezes မရှိပါ။ system package များကို openQA သုံး၍ စမ်းသပ်သည်။ အလိုအလျောက်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် repository သည်တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ရှိလျှင် openSUSE အဖွဲ့မှပြန်လည်သိုလှောင်ခြင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး download လုပ်ရန်ကြေးမုံနှင့်အတူထပ်တူပြုသည်။ ဒါကတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်
ကျွန်ုပ်စက်ရုံ၏ Gnome-shell နှင့်ပုံများဒီမှာ -
su (ငါတို့သည် superuser စကားဝှက်ကိုမိတ်ဆက်) zypper update zypper ကိုထည့်သွင်း - အသစ် - အကြံပြုသည်
zypper ar -f -packman-essentials http://packman.inode.at/suse/Factory/Essentials/ packman-essentials
Gnome repository ကို (အကြံပြုပါက Gnome …အကြံပြုသည်):
zypper ar -f -nnnome http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/Factory/openSUSE_Factory/ gnome
KDE Repository (KDE … optional ကိုအသုံးပြုလျှင်)
zypper update zypper install-new - အကြံပြု zypper dist-upgrade
zlip install vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird
zypper update ကို zypper ထည့်သွင်း - အသစ် - အကြံပြုသည်
zypper --type ပုံစံ devel_basis ထည့်သွင်းပါ
နှင့် voila ... သင်၌သင်၏ openSUSE စက်ရုံအဆင်သင့်ရှိပြီး Roling Release aquas တွင်ကြည့်ရှုသည်။
PS ကျွန်မက shell ကိုသုံးတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းက Numix Frost နှင့်အိုင်ကွန်ဖြစ်ကြသည် Numix စက်ဝိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » OpenSuse စက်ရုံ - ထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Internet, acpi နှင့် mouse မတွေ့ပါက openuse မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါသောအချိန်များအတွက်နေဆဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့
အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ၁၃.၁ ကဲ့သို့ OpenSUSE ဗားရှင်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားကြောင်းသတိမထားမိဘဲစက်ရုံအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ။ OpenSuse ကိုဘာကြောင့်အရမ်းချစ်ရတာလဲ။ အဘယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်မြင်သနည်း စကားမစပ်၊ Gnome ၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဤဖြန့်ဖြူးမှု၏နောက်ကွယ်တွင် OpenSUSE ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်ဝေရန်နေ့စဉ်ဂရုစိုက်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရခြင်းမှာပထမနေရာတွင်နေရာချခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး version ကိုနောက် version 13.2 နှင့် Factory တွင်မည်မျှတွေ့နိုင်သနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ OpenSUSE ၏အားသာချက်များကိုကြည့်ပါ။ အဓိကအချက်များမှာတည်ငြိမ်မှု၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဆော့ဖ်ဝဲမွမ်းမံမှုများ (သို့) အခြားသူများအနေဖြင့် yast ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် OpenSuse ကိုကြာမြင့်စွာမကြိုးစားခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထည့်သွင်းချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို OpenSuse Factory အသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ]
ဟုတ်တယ်၊ ငါမင်းကိုဒီဗားရှင်းနဲ့တူတယ်၊ Ati ဗီဒီယိုကဒ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရန်ခွင့်မပြုပါကအလွန်ဆိုးရွားပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်များ၏တည်ငြိမ်သောမောင်းနှင်အားများမရှိတော့ပါ။ လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြု၍ ၎င်းသည် gdm ကိုမဖြတ်သန်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်မပြုပါ၊ မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းခြင်းမပြုပါ။
Migu ၃ ဟုသူကပြောသည်
ငါ Current.iso ကို download လုပ်တယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကသူတို့ဟာတောက်တဲ့ကိုငယ်စဉ်ကပို့စ်တစ်ခုဘယ်အချိန်မှာအပ်နှံမယ်ဆိုတာငါသိချင်ခဲ့တယ်။ ငါတစ်ပါတ်အဘို့ကြိုးစားခဲ့ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ HP multifunction ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြရင်ငါ laptop ကိုထားလိုက်မယ်
သင်၏ပရင်တာကိုထည့်သွင်းရန် Yast -> Printers သို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ် hplib ဟုခေါ်သော hp driver ကိုအောက်ပါ Command ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် -
zplip install hplib
ငါ Suse ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေမှာဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ Mandrake ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံး live CD ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ Knoppix .. linux ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပဲထားခဲ့ဖို့ Ubuntu ပဲ။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Sabayon ကဲ့သို့အဝေးပြေးလမ်းမများကိုကျွန်တော် Ubuntu သို့ပြန်ခဲ့ပေမယ့်သိပ်မအေးတော့ဘူး။ ယူနစ်ရောက်တဲ့အခါငါကအခြားထာဝရတည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ screenshots တွေကိုအမြဲတမ်းငြူစူခဲ့တဲ့ ArchLinux ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါ Manjaro ကိုသုံးခဲ့တဲ့အခြားကွန်ပြူတာတစ်ခုမှာသူ့ကိုထည့်သွင်းခဲ့ရတယ် .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကို configure လုပ်ထားလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါက Ubuntu ဟာ Debian ဆီကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ် .. Manjaro ArchLinux .. Manjaro .. ဒီညွှန်ကြားချက်အားလုံးပြောတာက စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ Linux ၏အနာဂတ်ဖြစ်သင့်သည်။ OpenSuse နှင့် Red Hat တို့သည် Linux ၏ ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပြီး OpenSuse ကဤခြေလှမ်းကိုလှမ်းနေခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုဤမျှကြိုးစားအားထုတ်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။ ..
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းညွှန်အတွက်ရည်ညွှန်းသောကြောင့် Peercheco အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ SUSE ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် Kde နှင့်သင်တည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်ဟုသင်ပြောသောအခါသင်မှန်ပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပထမဆုံးနှုန်းထားဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့ဘာသာပြန်သည့်ပထမအဆင့်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းရှိသည်။ သင်ကဤသို့ဆိုကြသည် - »ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း ၁၃.၂ သို့ပြောင်းသလားသို့မဟုတ် Rolling Release ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့် OpenSUSE Factory ဗားရှင်းသို့ပြောင်းပါသလား။ အတိုချုပ်ဆိုရသော်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရေးမကြီးပါဟုသင်ထင်သည်။ အကယ်၍ သင်ယခုထည့်သွင်းမထားပါကနောက်မှတပ်ဆင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ bug တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီး၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်အချိန်ရောက်မှဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေသိပ်မရှိလှပါ။
၁၃.၁ ဖြန့်ဖြူးမှုကိုစွန့်ပစ်ရတာဟာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဒါကအလွန်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပေးခဲ့ပြီးဆက်လက်ပေးနေတယ်။ တိုတိုပြောရရင်ဖြန့်ဖြူးမှုအပြောင်းအလဲရှိတိုင်းငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ ကျနော်တို့ကလာမယ့်လိမ့်မည်ဟုမည်သို့မသိသောကြောင့်ကောင်းစွာသွားသည်။
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည်အမြင့်ဆုံးတည်ငြိမ်မှုကိုရှာဖွေနေပြီး ၁၃.၁ မှ ၁၃.၂ သို့ပြောင်းလိုလျှင်စက်ရုံသို့ပြောင်းပါက ၁၃.၁ ကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် Evergreen အထောက်အပံ့ဖြင့်တိုးချဲ့ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်:
အနည်းဆုံး 2016 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိအချိန်ရှိသည်။ ငါဆာဗာတွင်အတူတူလုပ်ပါ။
r @ y ဟုသူကပြောသည်
Gentoo, Ubuntu, Debian နှင့် Arch တို့ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ငါစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်မှာ OpenSUSE ဖြစ်သည်၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် ၁၃.၁ ကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး Debian တည်ငြိမ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သော်လည်းလက်ရှိ packets များစွာရှိသည်။ ငါနေ့စဉ်သုံးရန်အထူးသဖြင့်လက်ပ်တော့နှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဝန်းကျင်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ဤ distro သည်အခြားသူများတွင်ကျွန်ုပ်မတွေ့ရသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်လေးနက်မှုကိုခံစားစေသည်။
ar @ y ကိုစာပြန်ပါ
အမှန်စင်စစ်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည် Debian Stable ကိုယ်တိုင်ထက် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ Slackware ၏အမြစ်များပြသလျက်ရှိသည်။
ငါ Debian Testing KDE ကိုသုံးတယ်။ ဒါကအရမ်းတည်ငြိမ်တယ်၊ ငါ့ကိုဘာမှမအောင်မြင်ဘူး၊ အရမ်းမြန်တယ်။ Suse ဟာ repositories ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ သင်ပေါင်းထည့်ရမယ်၊ ငါ netuse ထဲမှာ opensuse ကိုသုံးတယ်၊ ဒါကလည်း distro ကောင်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် Debian ဟာတင့်ကားတစ်စီးပါ
Slack သည်မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုမဆိုချိုးဖောက်သောခြားနားမှုနှင့်အတူ OpenSUSE သည်အရသာကင်းသောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
ငါကစက်ရုံကို RR ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးသုံးခဲ့တာကြာပြီ။ ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကပိုပြီးအကောင်းမြင်လို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းကို Fedora နှင့် Win7 နှင့်အတူ (Asus ဘုတ်၊ UEFI မဟုတ်နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက UEFI မဟုတ်) တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးအရာအားလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည့် EFI bios များပါသည့် Acer TravelMate B113-E ရှိသည့် Netbook (Fedora 21 (alpha, ဒါပေမယ့်လည်းဇိမ်ခံပစ္စည်း) နှင့်အတူကျွန်ုပ်တွင်ရှိနေသည်။ ) သုညပြproblemsနာများနှင့်သူတစ် ဦး တည်းသာလျင်မြန်သည်။
UEFI ပြproblemsနာအားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်သည် openSUSE ကို install လုပ်ပြီး Fedora ကို install လုပ်ခဲ့သည်။ (ကျွန်တော်သည် disk ကို modernization အတွက်အနည်းငယ်ခွဲထုတ်သည်) ထို့နောက် UEFI ကို အသုံးပြု၍ boot မတိုင်မီ F12 ကို နှိပ်၍ boot menu မှထွက်ရန် bios (အကယ်၍ ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့လျှင်၊ Grub တွင် Fedora သာပေါ်လာသည်) ကျွန်ုပ် openSUSE ဖြင့်စတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Yast နှင့် Boot boot အပိုင်းသို့သွားပြီးလျှင် Grub2-EFI ၌ကျွန်ုပ်ရှိသေးကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုခဲ့သည် ပြန်လည်သုံးသပ်သည်အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များကို enabled ... ။ ငါပိတ်လိုက်သောအခါ၊ voila! openSUSE Grub2 ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းယခုသူသည် Fedora option ကိုထည့်သွင်းလိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လိုချင်သော system ကို "ထူးခြားသောသော့များ" ကိုအသုံးမပြုဘဲ boot လုပ်နိုင်သည်။
သူကအကြံပြုချက်လား၊ မမှန်လားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် root အတွက် 'btrfs' နဲ့ '/ home' အတွက် XFS ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တကယ်မြန်သွားတယ်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ openSUSE စက်ရုံသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကစနစ်ဖြစ်သည်။
... PackMan အတွက်စက်ရုံအတွက်ပေါင်းထည့်ခြင်း (ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ YoYo) ... ငါဘာမှမလွဲဘဲ ...
ကျွန်ုပ်၌ရှိသောဝိုင်ဖိုင်ပရင်တာတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်ကိုခေါင်းကိုက်ခြင်းအနည်းငယ်သာဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ရိုက်ချက်များသည် firewall ကိုဖြတ်သန်းသွားသည် (Fedora တွင်၎င်းကိုငါလျင်မြန်စွာ configure လုပ်သည်။ openSUSE တွင်ကျွန်ုပ်သည် firewall မှတဆင့်ကြာမြင့်စွာဖြတ်သန်းနေရသည်။ )
ငါ၏အတိုတောင်းသောအတွေ့အကြုံအရငါစက်ရုံသည် 13.2 အစားရွေးချယ်ရန်အလုံအလောက်တည်ငြိမ်သည်
openSUSE သည်ကျွန်ုပ်၏ distro ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ laptop ထဲသို့ install လုပ်၍ KDE သည်အသွင်အပြင် (သို့) ဖောင့် (Aller) ကိုပြောင်းလဲလျှင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
Desktop ပေါ် openSUSE နှင့်လက်ပ်တော့ပေါ်ရှိ Arch တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည် (သူသည်များသောအားဖြင့် Linux ကိုမုန်းသည်။ သို့သော်ယခု မှစ၍ Windows ကိုတောင်မလိုချင်ပါ။ )
ကက်သလစ် Virgil ဟုသူကပြောသည်
ငါခင်ဗျား libdvdcss Repo ကိုလည်းထပ်ထည့်လို့ရတယ်။
ငါအရင်က Install လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်စီမံကိန်းကအစိမ်းရောင်ရှိလို့သိပ်မကောင်းဘူး။ အဲဒီ installation ထဲမှာအထိခိုက်မခံတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ YaST အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ YaST ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နေတာလား။
Virgil Caesar အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ Yast သည်ပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ပြီးယေဘူယျအားဖြင့်အားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ libdvdcss repo မူ၎င်းစက်ကိုကျွန်ုပ်မသုံးသောကြောင့်၎င်းအတွက်သုံးနိုင်မရကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် VLC ဖြင့်အရာရာကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ငါသည်ငါ့အလုပ်မှာဖတ်နေသောအခါသင်ဤ post ကိုနှင့်ငါ့ကိုသွေးဆောင်။ အခုချိန်မှာအရမ်းပွင့်နေပြီ၊ အခု install လုပ်ပြီးသား openSUSE ပါတဲ့ Notebook ကနေမင်းဆီကိုစာရေးနေတယ်။ သူ့ဂရုစိုက်မှုကိုဗေဒမှာအရမ်းသဘောကျတယ်။ ငါ Linux Mint မှလာစဉ်သူ့ထံမှသင်ယူနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အဆုံး၌ Linux ကဲ့သို့ချစ်မြတ်နိုးသည့်အတိုင်းဤလောက၌မဖြစ်နိုင်ပါ။
"မသိသော" (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်) ကိုအသုံးပြုရန်ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအားပေးခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်။ မင်းကသင်၏ SUSE: D ကိုအရမ်းသဘောကျမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် Arch နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျကိုကြေငြာသော်လည်းအခြားတစ်ဖက်မှ OpenSUSE ကိုမနာလိုမှုဖြင့်အမြဲကြည့်လေ့ရှိသည်။ ငါစမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့် Antergos မှာအရမ်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ငါ xDD မသိဘူး။
ငါစက်ရုံဗားရှင်းကို download လုပ်တော့မယ်။ ငါကြိုက်တဲ့ distro ကိုနေ့တိုင်းမွမ်းမံချင်တယ်။ 🙂
သို့သော်ပေတရု၊ သင်သည်မကြာသေးမီက Slackware ကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါလား။
အဲဒါကြောင့် Slackware ကိုငါ့စက်တွေ၊ ဆာဗာတွေပေါ်မှာသိမ်းထားပြီးဒီမှာနေဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ဤလများအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဤ distro ကိုအလွန်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဤအဆင့်သည်မှန်မမှန်သိရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြေဟုတ်ကဲ့ .. အမေဟုတ်ကဲ့။ ဤသည် distro ငါ့ကိုအောင်ပွဲကိုငါ့ကိုသိမ်းသွား။ သံသယမရှိဘဲငါကြိုးစားခဲ့တာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်မှာတခြားစကားလုံးမရှိဘူး
Rupit Date ကိုပြန်ကြားပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို ၀ န်ခံပါတယ်။ Slackware ကမကောင်းဘူးလို့ငါမပြောဘူး။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်သင်ထိန်းသိမ်းထားရန်သင်အပ်နှံရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် SUSE သည် Slackware မှမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဌာနခွဲတွင်နေသော်လည်း ပို၍ အဆင်ပြေသောအရာများဖြင့် - D.
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလားဆိုတာသိချင်တယ်။ ငါစက်ရုံဗားရှင်း iso ထံမှ2ပတ်ခန့်သို့မဟုတ်ဒီလောက်လောက် install လုပ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ install လုပ်ခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏ပြproblemနာက Plymouth အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Systemctl status ကို plymouth-start.service command ကို output ကို
တင်ပြီးပြီ: masked (/ dev / null)
Active: Sun 2014-10-19 20:52:03 CEST ကတည်းကမအောင်မြင် (ရလဒ် - အချက်ပြ) လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်က
ပင်မ PID: 292 (ကုဒ် = အသတ်ခံရ, အချက်ပြ = SEGV)
သတိပေးချက် - ယူနစ်ဖိုင်ကို disk ပေါ်တွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ 'systemctl daemon-reload' အကြံပြုသည်။
သူက startup သို့မဟုတ် shutdown မှာမပြဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အီးမေးလ်အကောင့်ကိုထပ်မံဖန်တီးစရာမလိုပဲ Ask သို့မဟုတ် desdelinux ဖိုရမ်သို့မည်သို့ ၀ င်ရောက်ရမည်ကိုပြောပြပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက် (သို့) ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် Aprilပြီလမှစ၍ ကျွန်ုပ်စာရင်းသွင်းပြီးပါပြီ။
Terminal ကို root အဖြစ်ဖွင့်ပြီး run ပါ။
systemctl plymouth-start.service ကို enable
systemctl plymouth-start.service စတင်ပါ
plymouth-set-default- ဆောင်ပုဒ် openSUSE –rebuild-initrd
ကြောင်းနှင့်အတူသွားသင့်တယ် :) ။
"plymouth-set-default-theme openSUSE –rebuild-initrd" command ထဲတွင်
ဤနေရာတွင် –rebuild-initrd ကအောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားသည်
ဒီတော့အရာအားလုံးကို zypper နဲ့ထည့်ပြီးတာနဲ့ system administration ကို yast ကနေတဆင့်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လား။
တနည်းအားဖြင့် repositories တွေဟာ "factory" ဖြစ်နေပြီ။ ငါဒီ distro မှာအသစ်ဖြစ်နေပြီ။ RR ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာမသိဘူး။
အမှန်စင်စစ်၊ install လုပ်ပြီးလျှင်သင်၏ Yast မှအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သည်။ သငျသညျပြင်ဆင်ထားကြလိမ့်မည်ငါ့အထိန်းမှလိုက်နာရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိကြပါ။
Perfect ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်၊ အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း၊ တိုးတက်နေဆဲ၊ petercheco နည်းပြဆရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကောင်းပြီကျွန်ုပ်မှာပြproblemsနာမရှိဘူး။ ရံဖန်ရံခါ terminal ထဲကိုပြေးဝင်တယ် -
ငါမပြောချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလှိမ့်နေပြီးသင်အမြဲတမ်းမွမ်းမံနေရမယ်။ အကယ်လို့သင်ဤမျှလောက်မွမ်းမံလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြန့်ချိမှုကိုအသုံးပြုပါ။ ယနေ့သင်သည် Evergreen မှတစ်ဆင့် LTS ဖြစ်သော version 13.1 ကို download လုပ်၍ ရနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ၁၃.၂: D. အသစ်အတွက် ၁၄ ရက်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ဒီ distro ၏ပြင်ဆင်မှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤ post မှ GNOME, KDE နှင့် Pacman repos ကိုချန်လှပ်။ ဗားရှင်းကိုယ်တိုင်နှင့်ကိုက်ညီသူများကိုသုံးပါ။ ဤနေရာတွင်သင်ကြည့်နိုင်သည်။
ငါစမ်းကြည့်ပြီးပြသဖို့ခဏကြာတယ် (ဒီလမ်းညွှန်ကိုကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ဘူး) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ laptop သည်အလွန်ပူပြင်းလာသည်။ Opensuse တွင်ကျွန်ုပ်အား t °ကိုထိန်းညှိရန်ကူညီသည့် program တစ်ခုရှိပါသလား။
Laptop-mode-tools package ကို install လုပ်ပါ။
ကိုယ့်စက်ရုံသို့အဆင့်မြှင့်။ ယခုတွင်ငါသည် Apper ကိုစတင်ရန်၊ repositories ကိုကြည့်ရှုရန်၊ update လုပ်ရန်သို့မဟုတ် yast မှအခြားအရာများကိုပင်ကြိုးစား။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှဖွင့ ်၍ မရပါ။ အခြားမည်သူမဆိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
စက်ရုံအတွက် KDE repo ကိုရေးခဲ့သလား။ system ကို reboot လုပ်ခဲ့လား။ ငါပြောမယ်၊ ပြproblemsနာမရှိဘူး၊
ကျွန်ုပ်သည် OpenSUSE 13.2 လမ်းညွှန်အတိုင်း kde နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ nvveau များနည်းနည်းဆင်းရဲနေသောကြောင့် Nvidia driver နှင့် 3.16.6-2-desktop kernel အသစ်သို့အဆင်မပြေသေးသည့်နည်းနည်းလေးသာရှိသည်။
တစ် ဦး က petercheco နှုတ်ဆက်သည်
packS repositories ပြောင်းပြီးကတည်းက openSUSE 13.2 အတွက်ဒီလမ်းညွှန်ကိုသုံးဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ Taringa မှာကျွန်တော့်ရဲ့ပို့စ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် pertercheco ။ ငါသည်သင်တို့၏ link ကိုကောင်းသောမှတ်စုယူပါ။
ဖရန်စစ္စကို ဆွာရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
သံသယတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည် ArchLinux တွင်ရှိနေပြီး OpenSUSE ၏ဤဗားရှင်းကကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့အသုံးပြုသောကြောင့်ဤဌာနခွဲအတွက်စီးပွားဖြစ် ATI drivers (AKA Catalyst) ရှိမလားမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အပူချိန်နှင့်အပူချိန်မှာကျွန်ုပ်၏အပူချိန်မှာလည်းမြင့်တက်နေပါသည်။ APU A6 Version 3xxx ပါတဲ့လက်တော့ပ်၊ ကျွန်တော့်မှာ Development အတွက် Lampp နဲ့ Android-sdk လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကောင်းပါသလား။
မေးခွန်းများအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်ယင်ကောင်အတွက်စမ်းသပ်ရန်အချိန်မများပါ။ ရွှင်လန်း!
Francisco Suarez ကိုပြန်သွားပါ
Install opensuse 13.2 ကိုကျွန်ုပ်သုံးသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ပြhaveနာများရှိနေသည်။ ၎င်းသည်ဆာဗာနှင့် ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်သောအမှားကကျွန်ုပ်အားသတိပေးသည်မှာသူမသိပါ။ ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကငါဟာဘာပြproblemနာမှမရှိဘဲသွားလာလို့ရတယ်၊ ငါဟာဂူဂဲလ်ကိုရှာကြည့်ပြီးဘယ်နေရာမှာမှဖြေရှင်းလို့မရဘူး။
သူများသည် opensuse ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
/etc/sysctl.conf ကိုတည်းဖြတ်ပြီး ipv6 ကိုရည်ညွှန်းသောအပိုင်းသည်ဤကဲ့သို့သောတန်ဖိုးများကိုပေါင်းထည့်ပါသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပါ။
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = ၁
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = ၁
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = ၁
ပြီးရင်ဒီ command ကို reboot လုပ်ပါ။
zypper ref ကို
GNU / Linux တွင်ရုပ်ပြများဖန်တီးရန်လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုရှာခြင်း
Aptoide: Pirate Store? ... ပိုကောင်းတဲ့ repositories?